Vatungamiri veZCTU Vogara Vakatyityidzirwa Nguva Dzose
Gumiguru 11, 2019
Mr Peter Mutasa
Hutungamiri hwesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, hunoti hwave kugara hwakabatira hura mumaoko zvichitevera kutambira kwahwakaita mashoko ekuhutyisidzira nerufu.
Mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa, vaudza Studio7 kuti hutungamiri hwesangano ravo hwave kutyira hupenyu hwahwo zvichitevera kutambira kwavanoti hwakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa neChishanu manheru.
Aka kave kechipiri hutungamiri hweZCTU huchitumirwa mashoko ekutyisdzirwa nerufu gore rino.
Asi VaMutasa vati havasi kuzodzokera kumashurenemkumirira zvido zvevashandi avo vavanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhan’ara nyaya iyi kumapurisa, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vati havakwanise kutaura nezvanyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo.
VaMutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo weGeneral Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matanho api zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita hupenyu kubudikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro.
Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, rinoti richatanga kuramwa mabasa neMuvhuro zsezvo richi mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa.
Mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumiririrwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Zvichakadai, mamwe masangano evadzidzisi anoti reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuAmerica ari maRTGS paawa imwechete paanenge achinyoresa bvunzo dzeGrade 7, Fomu 4 pamwe Fomu 6 idzo dzakatarisira kutanga kunyorwa svondo rinouya.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo, VaPaul Mavhima, sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano. Pataenda pamhepo VaMavhima vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Nyaya Ina Thoms Chiripasi
Vakuru muHurumende, Nhengo dzeParamende, Vopembedzwa neKubuda Pachena paChirwere cheCovid-19
Zvikwata zvekuEurope Zvoita Chipatapata Kuda Kutenda Vatambi vemuZimbabwe
Mapurisa muSouth Africa Anorambidza Vanhu Kuratidzira paMuzinda weZimbabwe
Mutori weNhau, Hopewell Chin'ono, Anorambirwa Chibatiso neDare
Botswana Inoti Zimbabwe Inofanirwa Kuzeyiwa neSADC Yose, Kwete Trioka